Hetsika ara-kolontsaina : Hanjaka ny fifanakalozana mandritra ny Nosy Be Jazz Festival
07/03/2018 admintriatra 0
Miditra amin’ny andiany faha-2. Ankoatra ny Donia sy ny Sômaroho ary nyNosy Be Symphonie, hetsika ara-kolontsaina iray tanterahina any amin’ny Nosy manitra ny « Nosy be Jazz Festival » (NBJF). Hanjaka hatrany ny fifanakalozana mandritra …Tohiny
Mbola Rajaonah : Hanome fitaovana basikety ho an’i Manakara
Araka ny efa fantatra, dia notanterahina tao Manakara ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018, ny 24 febroary – 4 marsa teo. Tamin’izany indrindra no nampiasana ireo fitaovana manara-penitra fampiasa eo amin’ny fifaninanana basikety (panneaux), izay …Tohiny
Ambanidia : Rangahy nisy namono hita faty
Raim-pianakaviana iray izay voalaza fa tratra alina raha handeha hamonjy fodiana eny Ambatoroka no hitan’ny olona nitsirara tao anaty hady teny Ambanidia akaikin’ny EPP Volosarika omaly maraina tokony ho tamin’ny 07 ora sy 30 minitra. …Tohiny
Maizina mandritra ny 24 ora eo ho eo isaka ny roa andro ny ao an-tampon-tanànan’i Manakara noho ny fahatapahan’ny jiro. Noho izany, dia tsy misy izay tsy mimenomenona ny mponina any an-toerana, indrindra ireo manana …Tohiny
Noporofoin’ny firenena amerikana fa matoky tanteraka ny fitondrana tarihin’i Hery Rajaonarimampianina izy ireo. Iny fanolorany ny “Vedette” mitondra ny anarana hoe “Akio” asa tanan’ny kaompania amerikana Metalshark, tany Nosy Be, omaly iny no nanamafisany an’izany. ...Tohiny
Maroantsetra : Vita ny lalana
Hery Rajaonarimampianina : Mitombo isa ny mpanohana azy